Kapoor & Sons Meel Qaas Ah Ayuu Qalbigayga Ka Dagey: Alia Bhatt - Hablaha Media Network
Kapoor & Sons Meel Qaas Ah Ayuu Qalbigayga Ka Dagey: Alia Bhatt
HMN:- Waxa kasoo wareegatey sanad Alia Bhatt markey ka soo muuqatey filimka Kapoor & Sons, doorka Tia Singh, gabar aad ujecel madadaalada. Alia Bhatt aya sheegtey in filimka qalbigeeda boos fiican kadagey.
Alia aya barteeda Twitter ka ugu Mahad celisey director Shakun Batra fursada uusiyey ee filimka. waxa sido kale kula jirey Sidharth Malhotra , Fawad Khan, Rishi Kapoor , Rajat Kapoor iyo Ratna Pathak Shah.
“Filim aad u macan iyo xasuus aad u qurxan, wad mahadsan tahay jecelka #KapoorAndSons, wanku jeclahay @shakunbatra @AyeshaDeVitre.” Ayey quruxleydan kuso qortey barteda Twitter ka.
Sidarth aya sido kale bartisa Twitter ka soo dhigey “waxa kasoo wareegatey sanad Kapoor & sons, wad mahadsan tahay @shakunbatra, @karanjohar sido kale qoskeyga shaashada ee Kapoor family. Waa xasuus aan marnaba la ilaawi karin. Wan idin jeclahay dhamantin.”
Producer Karan Johar aya sido kale ooga Mahad celiye kooxda filimka bandhiga fiican ey sameeyen, Filimka Kapoor & Sons aya soo baxey 18- March 2016, wuxuuna markaas noqday Hit asigoo ganacsi wacan gudaha Hindiya iyo daafaha caalamka ka sameeyay.
Warbixintaan Waxaa Si Qurux Badan Usoo Diyaariyay Soona Turjumay Yahye Yusuf…….